Big Bag, Fibc Bag, Kk olukiweyo Sack, Isikhongozelo Bag, Bag Jumbo - Packaging
Hebei Packaging Co., Ltd yinkampani enye ngobuchule iingxowa zokubopha eyahlukeneyo Hebei kwiPhondo of China kunye enye ngabanikezi inkulu kumantla China ngenxa kwiingxowa ezahlukeneyo, kuquka iingxowa sopakisho zoshishino kushishino, ezolimo, isakhiwo, yaye imveliso kwezimbiwa ukupakisha impahla bulk kunye neengxowa sopakisho yemihla ngemihla iivenkile, kudla, kunye wineshops ukupakisha oko abathengi oyifunayo.
amava ethu kunye nokuzinikela ziye zanceda ngempumelelo ukuba babe zoshishino wahlobana iinkonzo ezivela kumazwe ahlukeneyo kunye nezithili.
Thina abasebenzi ngenkuthalo kwaye emanyeneyo, izinto ezitshiphu, kunye mveliso yemveliso kunye nokusebenza kakuhle ukusebenza kunye. Ngoko ukulungele kakuhle ukuhlangabezana naziphi na iimfuno zakho kunokwenzeka ukuba imveliso na.
Siza kubuyekeza ithemba lakho ngentsebenziswano ngobubele, iimveliso ezikumgangatho ophezulu, amaxabiso zokhuphiswano kunye nenkonzo okutya epheleleyo.
inkampani yethu e Shijiazhuang City of kwiPhondo Hebei e-China. Hebei liphondo kufuphi yee-ntshona ngasentla of China kunye Shijiazhuang ngumzi yayo imali. Thina malunga 400 neekhilomitha kude eBeijing (ikomkhulu PRC), 1200 ngeekhilomitha ukusuka eShanghai (sixeko sikhulu China), kwaye ingande ngeekhilomitha ezili-400 ukusuka Tianjin (a kwizibuko kumntla China). Uninzi mveliso zethu ukusondela kulo mzi.
Wamkelekile apha, wamkelekile ukuba utyelele i-ofisi zethu mveliso, bamkelekile!
iingxowa opp lamination
iingxowa Isinikezeli shopping
iingxowa Garden / inshorensi / iingxowa ibhokisi